दरबार हत्याकाण्डलाई रहस्यमय मान्नुहुन्छ ? किन ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः जेष्ठ १९, २०७६ - साप्ताहिक
वास्तविकता थाहा नभएपछि घटना रहस्यमय हुन्छ । रहस्य शक्तिशालीहरूले साधारण मानिसहरूका लागि बनाउने राजनीतिक खेल हो । कुनै पनि घटनालाई ती मानिसले रहस्यमय बनाउँछन् जसलाई त्यसका माध्यमबाट सक्ता, शत्ति र सम्पत्ति प्राप्त गर्नु छ ।
यो हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित छन् । तिनको चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नहुन्जेल यसलाई सामान्य दुर्घटनामात्र मान्न सकिँदैन । रहस्यमय त छ नै यो दुःखद, वीभत्स र पीडादायी पनि छ ।
रहस्य केही छैन । सबैलाई थाहा छ । यत्ति हो बोल्न कोही चाहँदैनन् वा सक्दैनन् । यद्यपि पाप धुरी बाट कराएको सबैले देखेकैछन् ।
रहस्यमय नै मान्छु । किनभने अहिले सम्म जति पनि तथ्य आएका छन् ती तथ्यमा वास्तविकता वा सत्यता देखिँदैन ।
रहस्यमय नै हो नि । यत्रो वर्ष भैसक्यो राजपरिवारको हत्या कसले गर्‍यो, त्यो आजसम्म पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।
मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । प्रस्ट छ कि दीपेन्द्रले नै परिवारको हत्या गरेका हुन् । यसमा केही राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन जनतालाई भ्रममा पारेका मात्र हुन् ।
म त मान्दिनँ । किनभने मृत्यु आफैंमा रहस्य हो । व्यर्थमा टाउको दुखाउने काम किन गर्नु ?
यो विषयमा बोल्न मन छैन । सम्झियो कि आँखाबाट आँसु आउँछ, रुन मन लाग्छ ।
मान्छु, किनभने अहिलेसम्म राजपरिवारको हत्यारा को हो ठ्याक्कै पत्ता लागेको छैन । त्यसैले रहस्यमय नै छ ।
बालिका थपलिया, लेखक
रहस्यमय नै छ, किनभने अहिलेसम्म वास्तविकता बाहिर आएको छैन ।
केशव भट्टराई, अध्यक्ष, नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड
एकदमै रहस्यमय मान्छु, किनभने आजसम्म जे–जति सूचना बाहिर आए सबै अड्कालबाजी मात्र हुन् ।
रहस्यमय नै छ । सरकारी पक्षबाट आएका सबै कुरा झूटा हुन् जस्तो लाग्छ । आजसम्म जति सरकारमा आए सबैमा राजा बन्ने चाहना छ ।
यसमा अन्तराष्ट्रिय चलखेल छ जस्तो लाग्छ ।
दरबार हत्या काण्ड मात्र होइन । नेपालका हरेका काण्ड रहस्यमय हुन्छन् । दरबार हत्याकाण्ड षड्यन्त्रपूर्वक धेरै ठूलो योजना बनाएर गरिएको हुनुपर्छ जसमा बाहिरी देश पनि मिलेको हुनुपर्छ ।
हरेक नेपालीले दरबार हत्याकाण्डलाई रहस्यमय मान्नुहुन्छ । त्यसैले मलाई पनि रहस्यमय लाग्नु स्वभाविक हो ।
रहस्यमय मान्छु । किनभने आजसम्म राजपरिवारको हत्या किन गरियो, कसरी गरियो भन्ने सत्य–तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन ।
रहस्यमय नै मान्छु । दरबार हत्याकाण्डका सम्बन्धमा पुस्तकहरू पनि प्रकाशित भएका छन् । ती पुस्तकमा फरक–फरक कुरा लेखिएको पाइन्छ । त्यसैले दरबार हत्याकाण्डका सम्बन्धमा सत्य–तथ्य कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन जस्तो लाग्छ ।
एक खालको प्रतिवेदन बाहिर आए पनि त्यसमा सत्य–तथ्य नआएको हो कि जस्तो लाग्छ । त्यसैले दरबार हत्याकाण्ड रहस्यमय नै छ ।
बुद्धि तामाङ, हास्य अभिनेता
एकदमै रहस्यमय मान्छु । किनभने हत्यारा को हो, यतिका वर्षसम्म पत्ता लागेको छैन । त्यसैले यो घटना रहस्यमय नै छ ।
कोठाभित्र युवराज दीपेन्द्रले गरेको देख्नेहरू सबैले दिपेन्द्रलाई नचिन्ने कुरै नभएकाले त्यहाँ कुनै रहस्य छैन । बगैंचाका तीन मृतक अर्थात् आमा, भाइ र स्वयं दीपेन्द्र विषयक घटना देख्ने जान्ने कोही नभएकाले त्यो रहस्यकै गर्भमा छ । दिपेन्द्रले गरेको तथ्य प्रस्ट भए पनि किन र कसको सुझावमा गर्‍यो त ? देवयानीसँग भएको लगातार फोनको रहस्यले देवयानी यस विषयमा जानकार रहेको प्रस्ट छ । यसमा देवयानीको भूमिका रहस्यमय छ । भोज खाएकै पोसाकमा एउटा पेस्तोलले गर्न सकिने हत्याकाण्डमा सैनिक कम्ब्याट ड्रेससहित धेरै हतियार किन ? कसैले सोचेन–सोधेन । यो रहस्यको विषयमा प्रश्न उठेन, तर मेरो विचारमा भने उनले सैनिक कु गर्न चाहेका हुन् । हत्यापछि हुनसक्ने दरबारभित्रकै सुरक्षाकर्मीको प्रतिकार रोक्न र कु पछि सैनिक कमान्ड कायम गर्न ती पोसाक र हतियार उपयोग भएका हुनसक्छन् । सफल भएका भए सोही रात संविधान निष्क्रिय हुने र राजनीतिक कु पनि हुन सक्थ्यो । यसमा दीपेन्द्रको एक्लैको सोचले काम गरेको थियो कि विदेशीको पनि मिलेमतो थियो भन्ने पाटो रहस्यमय छ । यद्यपि प्रस्ट खुलेको पाटो, अर्ध खुलेको पाटो र पुरा नखुलेको पाटोलाई अलग नगरी सबैलाई रहस्यमय बनाउँदै स्वदेशी नोकर र विदेशी मालिकहरूको राजनीतिक अभीष्टका लागि प्रचारित गोयबल्ज प्रोपोगान्डाको जालमा फसेर देशलाई चक्रव्यूहमा फसाई त्यसपछि थोपरिएका गणतन्त्र, समानुपातिकता, संघीयता, जातीयता तथा पहाडी–मधेसी विभाजन, धर्म निरपेक्षता, हिन्दू धर्मको औपचारिक अन्त्य, मौलिक अधिकारको हनन र प्रदेशका नाम विषयक द्वन्द्व आदि सबै दरबार हत्याकाण्डका जगमा भएका हुन् । यो अचानक हुँदै गएको हो कि कसैको योजना अन्तर्गत हो ? कसैको योजना थियो भने पछि त्यसमा अरु कसैले एजेन्डा थपेर बाटो मोडेको पो हो कि ? भन्ने कुरा रहस्यमय छ ।